Doodda Maxaa Dagaal u Badala? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Ilhaan Ciise Maxamed — March 10, 2020
Marki aad dood gasho waxaa kaca shucuurta qofka iyo dareenkiisa, waxaana laga dareemayaa muuqaalkiisa iyo hadalkiisaba. Balse waxaa muhiim ah in aad celin karto shucuurtaada marki aad xanaaqdo, qofka waxaa laga rabaa in uu xakameyn karo naftiisa iyo dareenkiisaba.
Haddaba Doodda Maxaa Dagaal u Badala?
Waxaa dagaal u baddala intabadan afar qodob:
Labada qof ee doodeysa mid waliba oo kamid ah waxa uu rabaa guusha: Haddii aad ufiirsato 2da qof ee doodda maalaa yacniga ah ka dhaxeyso waxa aad dareemeysaa in qof waliba oo iyaga kamid ahi uu aad ugu qeylinaayo sida uu ugu guuleysan lahaa doodda.
Inta badan Caqliyadda ama Maskaxda oo faaruq ah: u fiirso doodaha lagu qabto “Fadhi-ku dirirada” intabadan waa qeylo aan lahayn wax xikmad ah ama murti ah, qofkasto oo ak istaago waxa uu garan karaa dadka dooddu kadhaxeyso in eysan ahayn dad raba natiijo, sugi maayaan illaa iyo in ey waqtiga isku dhaafsiiyaan. Balse maxaa sababay in dood aan wax cilmi ah ku dhisnayn sijoogto ah loo soo xaadiro galab waliba “Fadhi ku dirirka”?
Waxa laga doodayo oo aan xog badan laga heyn: doodaha dagaalka isku baddalo waa kuwo ku dhisan aragti ah “Hebal-ayaan ka maqlay ama Idaacadda ayaan ka dhageystay” qofka doodda billaabayo wax xog ah oo tix raac leh mahaayo, hasa ahaatee waxa uu ku faraxsanyahay ama uu rayn rayn ku dareemayaa in uu noqda qofka ugu doodda badan ee yimaada goobta “Maqaaxida”.
Dhageystayaasha oo ku raaxeysta qilaafka labada qof iyaga oo u fahansan Madadaallo iyo qaraaxo :dhageystayaasha dood waliba ee dhacdaa waxa ey si dabiici ah u gu qasbanyihiin in ey kala taageeraan labada qof ama labada koox ee doodeysa, balse dhageystayaasha doodaha Maqaaxiyaha waxaanba dhihi karnaa iyaga ayaaba abuura dagaalka, sababtoo ah waxa aan arknaa iyaga oo doodda sii kiciya tusaale “war ninka ma warkaaduu beeniyay? War ninka iska dhici IWM”
Maxaan Kuyarayn Karnaa In Dooddeennu Dagaal Isu Badasho?
In aad ka cudur daarato ama aad ka’aamusto qofka doodda kula soogalo.
Marki aad gashay kaddib haddii ey dooddu dagaal isku badasho jooji, jooji oo dheh “Tush Xalaal”.
Sidookale waxa aad sameynkartaa in aad Mowduuca dhanba aad badasho, waa haddii dagaal idinka soo dhawaado.
U ogolaaw qofka doodda idiin dhaxeyso in uu hadlo, adiguna dhageyso oo sifiican oo daggan u dhageyso.
Intabadan doodaha aan macnaha lahayn waxaa kuu wanaagsan in aad ka fogaato, sababtoo ah waxa ey duminayaan aqlaaqdaada iyo dadnimadaadaba.
Nabigeenna NNKH waxaa laga wariyay in uu yirir ‘kataga doodaha, maxaayeelay qofka Muslimka ahi madoodo e’. (ama sida uu yiri suubanaheenna).
Tags: Doodda Maxaa Dagaal u Badala?
Next post Yurub Waxay Si Adag Uga Fakaraysaa Furriinka Ameerika
Previous post Maxaad Ka Taqanaa Cudurada Wadnaha Ku Dhaco?